Q&A - UP Boka
Unogona here kupa OEM sevhisi?
Ko zvakadii ruzivo rwechigadzirwa chako?
Tinogona kupa main technical parameter, mashandiro, chimiro chezvigadzirwa nezvimwe zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
Unogona here kupa pre-kutengesa kudzidziswa?
Inowanikwa sekureba sekuda vatengi
Chero ipi yekutengesa-sevhisi?
Kana icho chigadzirwa chakakuvadzwa nekuda kwekugashira mutengi zvisirizvo, mutengi anofanira kutakura zvese zvinodhura zvinosanganisira mari uye mutero wekutakura zvinhu nezvimwewo, panguva yewarandi, zvisinei, kana zvakuvara zvichikonzerwa nekutadza kwedu kugadzira, isu tinopa muripo wekugadzirisa zvemahara kana kutsiva. .
Zvakadii nezve kumisikidza uye kudzidziswa?
Tinogona kupa vatengi kuisirwa mahara uye kurovedzwa, asi mutengi ndiye anoitisa tikiti-yekudzoka matikiti, chikafu chemuno, pekugara uye mainjiniya mvumo.
Zvakadii nezveiyo mhando yevimbiso nguva?
Iyo yemhando yekuvimbisa nguva yechigadzirwa ndeye gumi nemaviri mushure mekusiya Chinese chiteshi.
Kazhinji T / T uye isingachinjiki L / C pakuona kuti ishandiswe kubhizinesi uye zvisinei, dzimwe nzvimbo dzinofanirwa kusimbisa iyo L / C neyechitatu bato zvinoenderana nezvinodiwa neChina bhengi.
Isu tinokupa iwe yakanakisa mutengo zvinoenderana nekuti iwe uri mutengesi kana wekupedzisira mushandisi.
Zvakadii nezve yako nguva yekuendesa?
Kazhinji, nguva yekuendesa yezvinhu zvakajairwa ichave mazuva makumi matatu-60 mushure mekugamuchira dhipoziti. Nekudaro, yenguva yekuendesa yezvakakosha kana hombe michina yemidziyo ichave mazuva 60-90 mushure mekugamuchira muripo.
Unogona here kupa yemahara samples?
Isu hatipe masampula emuchina wakazara. Kuti titsigire vatapi vedu nevatengi, isu tinopa mutengo wakasarudzika wemashini ekutanga mashoma uye iwo masampula ezvigadzirwa zvekudhinda, asi nhumbi dzinofanira kutakurwa nevanozvigovera nevatengi.